दुरदर्शी नेताका रुपमा मदन भण्डारीलाई लिन्छु - दुनियाँको खबर
Home अन्तरवार्ता दुरदर्शी नेताका रुपमा मदन भण्डारीलाई लिन्छु
दुरदर्शी नेताका रुपमा मदन भण्डारीलाई लिन्छु
on: १० भाद्र २०७७, बुधबार ०९:४१
लामो समय जनप्रतिनिधि विमुख भएको मुलुकको स्थानीय तहमा सविंधान निर्माणपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएर क्रियाशिल भएका छन् । राज्यको स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट नगर,प्रदेश र संघिय सरकारको स्वरुप निर्माण भई राज्यको शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा संघिय राजधानीको थानकोट नाकामै जोडिएको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १५ का निर्वाचित अध्यक्ष उत्तमबहादुर राउत हुनुहुन्छ । विसं २०४७ सालमा ज्ञानोदय मावि बाफलबाट माध्यामिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका राउत आर्किटेकका स्नातक र संस्कृति,पुरातत्वमा स्नातकोत्तरको योग्यता हासिल गर्नुभएका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । सानैदेखि अध्ययन र समाजसेवामा ज्यादै रुचि राख्ने राउत समाज सेवाकै लागि राजनीतिक सुरुवात वडाबाट गरेको बताउनु हुन्छ । वडाअध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएपछि उहाँको सक्रियतामा वडा १५ मा भएका विकास निर्माणलगायतका समसामयिक विषयहरुमा केन्द्रित रहेर दुनियाँको खबर साप्ताहिकका प्रतिनिधि जनार्दन अधिकारीले गर्नु भएको कुरकानीको अंश
उत्तमबहादुर राउत – वडाध्यक्ष
वडा नं १५ चन्द्रागिरी नगरपालिका
तपाइ आर्किटेक इञ्जिनियर,संस्कृति र पुरातत्वविद यो फिल्डबाट राजनीतिमा कसरी आउनु भयो,प्रेरणाको स्रोत कसलाई मान्नु हुन्छ ?
जीवन त बाल्यकालदेखि नै सुरु हुँदो रहेछ । म सानैदेखि विद्यालय पढ्दा नै कविता गोष्टीजस्ता साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्दथें । हरिगोविन्द लुइटेलले मासिक रुपमा कवि गोष्टी गर्नुहुन्थ्यो । राउण्ड टेबलमा बसेर कविता भन्ने,बोल्ने र टिप्पणी गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो बेलादेखि नै प्रगतिशील वामपन्थी धारमा छाप लागेको थियो मेरो । अर्कोतर्फ मेरो समाज सेवामा पनि रुचि थियो ।
म बिग्रे समाज बिग्रिन्छ–म सप्रे समाज सप्रन्छ भन्ने मलाइ लाग्थ्यो । त्यसैले दिनको आधा घन्टा समाज सेवा गर्ने कुरा सोचें र त्यसैमा जोड दिदै आएँ । एभरेष्ट कलेजमा पाँच वर्ष प्रिन्सिपल भएर अवसर पाउँदा एउटा नेतृत्वबोध गर्ने मौका पाएँ । यसले गर्दा झन् उत्साहित हुँदै अगाडि बढ्ने मौका मिल्यो । राजनीतिक प्रेरणाको कुरा गर्दा मदन भण्डारीलाई नै मान्छु ।
२०४७ सालमा बानेश्वरमा भाषण सुन्दा ज्यादै प्रभाव पर्यो । जनताको बलुदलीय जनवादको कुरा ठ्याक्कै–सबै नबुझी नहुने त्यो बेला मन पर्यो । भण्डारीले त्योबेला नेपालको जलस्रोत साना–साना खोलाबाट बिद्युत निकाल्न जनस्तरबाट र ठूला योजना सरकारले गर्ने भन्ने भविश्यवाणी गरजस्तै लाग्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै मिलेको छ । त्यसैले दुरदर्शी नेताका रुपमा मदन भण्डारीलाई लिन्छु म । मेरो पारिवारिक पृष्ठभुमि सामन्ती हो । म भने वामपन्ती विचारधारामा प्रभावित हुँदै आएँ ।
वडा अध्यक्ष जितेपछि के कुरामा जोड दिएर आफ्नो भिजन बनाउनु भएको छ त ?
स्थानीय तहमा मुख्य तीन कुरा रहेका छन् राजनीतिक,कानुनी र सामाजिक पद यी तीन कुराको तालमेल गराउनु साह्रै गाहे रहेछ । काननु र समाजलाई डोर्याएर लैजाँदा राजनीति भाग्छ । राजनीति र कानुनलाई मिलाउन खोज्दा समाज भाग्छ ।
तिव्र शहरीकरणमा जोडिएको यो वडा नं १५ जम्मा ११ वर्ग किमीभित्र १३ हजार ५ सय जनसंख्या भएको यो वडामा विकास निर्माणमा अधिकतम् बजेट उपयोग गरेर परिणाम देखाए पनि आफ्नो लक्ष्यमा सधैं कटिबद्ध छु । यो भन्दा अगाडि वडालाई जति बजेट पर्छ त्यहि मात्र बाँडफाँड गरी कार्य गरेको तथा थप बजेटलाई पहल नगरेको पाएँ । सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले महत्वमा पनि कमी,आदिवासीहरु पनि नभएको,ज्यापु समुदाय पनि अन्यत्रबाट आएको,मगर जाति मात्र अलि पुरानो देखिने यो वडा न औधोगिक न कृषि शहरको बासोबासमा अढाइ किलोमिटर आइवे भएकोले व्यापारिक मात्र रहेको छ । मेरो धारणा हिलो र धुलोमुक्त हुनुपर्छ भन्ने छ । शहरी विकास र भौतिक पुर्वाधारलाई वातावरणीय रुपले शहरी खेती,कौशी खेतीलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
मेरो विषय पनि शहरी खेतीमा थेसिस गरेकोले त्यतर्फ आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेको छु । वातावरण,उत्पादन,समान वितरण र दिगो विकासतर्फ ध्यान दिएको छु । किर्तिपुर र हाम्रोबीच एउटा गल्छी छ । लिच्छविकालिन नाम लसिकबबाट नैकाप भएको भनिन्छ । त्यो गल्छीमा पर्यटकीय विकास गर्नुपर्छ भन्ने योजना अनुरुप कार्य गरिरहेको छु । जापानको खाइके शहरबाट साकुरा ल्याई र यताबाट पैयुंको विरुवा पठाइ मैत्री सम्बन्ध विकास गरेका छौं । हाम्रो प्रतिनिधीहरु जापान भ्रमण गरेर आउनु भएको छ । धार्मिक सांस्कृतिक रुपमा विष्णुदेवि मन्दिर सुडो खोलाको संगममा छ । यो सात गाउँको जात्रा हुने स्थलको रुपमा पनि छ ।
यो ठाउँमा २०३७ को बाढीले नदीमा अंशुवर्माको पालाको घ्याम्पो फुटेको अवस्थामा छरपष्ट रुपमा बहुमुल्य सिका भेटिएकोले सिंहले झण्डा समाएको सिक्का युनेस्कोमा दर्ता गर्ने स्थलको रुपमा रहेको छ । यो स्थानको संरक्षण र सम्वद्र्धनको खाँचो देखिन्छ । यसरी भौतिक पुर्वाधार आजको अवस्थामा छ ।
विकास निर्माण सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
तपाइले वडाको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि दुई वर्ष पुगिसकेको छ । यो समिक्षाले बाँकी कार्यअवधिमा समेट्नु पर्छ भन्ने लागेको छ ?
अब बाँकी । रहेका कार्यवधिमा यस अघि भएगरेका कामको समिक्षा गर्दै वडा भित्रको सडक कालोपत्रे गर्ने ,सडकलाई धुलोरहित बनाउने,घरबाट हिड्डा लगाएको जुत्ता घर फर्किदा त्यस्तै टल्किएको रहँने किसिमले सरसफाइमा ध्यान दिने । सांस्कृतिक पार्क गल्छी आर्यआर्जनको स्रोत वृद्धि हिराडिल र प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको हक प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । बल्खु ३ किमी हाम्रो वडामा पर्ने १.५ किमी सडक यो वर्ष पिच गर्ने,१० मिटर चौडाको बाकी अर्को वर्ष पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु । नैकापदेखि विष्णुदेवि मन्दिर लोअर रिङरोड,सनराइजदेखि कलंकी १३ फुटको अपर रिङरोड बनाउने । त्यसैगरी खानेपानी क्षेत्रमा हाल १६ सय धारा छ । बोरिङ गरी ६०० घरलाई थप वितरण गर्ने योजना रहेको छ । शिक्षामा वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोष म उत्तम बहादुर र माधव केसीका
नामबाट हामीले पाउने पारिश्रमिकबाट खोलिएको कोषमा १० लाख जम्मा छ ।यसबाट विष्णुदेवि माविमा २० जना र कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने ७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउँदै लैजाने योजना छ ।
अहिले कोभिड–१९को संक्रमणले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भैरहेको छ । यो डरलाग्दो माहामारीबाट बच्न वडाको तर्फबाट के गर्नुृ भएको छ ?
जडिल प्रकृतिको कोरोना भाइरस मार्न सक्ने कुरा भएन । केन्द्रिय सरकारले खुला सिमानामा जुन रुपमा कडाई गर्नुपर्ने हो सो हुन सकिरहेका छैन् । हाम्रो वडाको तर्फबाट कोरोना रोकथामका लागि जनचेतना जगाउने,डिटोल साबुनसहित विभिन्न स्थानमा हात धुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छौं । यससंगै मास्क वितरण सरसफाई,पोष्टर पम्प्लेटिङ्गलगायत कार्य निरन्तर रुमा भैरहेको छ । चन्द्रागिरीद्धारा काठमडौको नागढुंगामा जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोना रोकथामका विषयमा सक्रियताका साथ कार्य भैरहेको जानकारी पनि यस अवसरमा गराउँन चाहन्छु ।
सरकारी निशेषाज्ञाको अवज्ञा गरी विदेशबाट जहाज त आइरहेको छ नि ?
जब दामोदर पाडेलाई भद्रकालीमा काटियो,इतिहासको त्यो बेलादेखि नै नेपालमा विदेशीहरुको चलखेल चलेकै छ । समुद्रसम्म पुग्ने स्वाधिनता हामीसंग छैन् । सानो देश हाम्रो बोली सुनिदैन । भाइरसको जाँच कस्तो भा छ,त्यो सत्य नै होला ।
केन्द्यि सरकारले यथेष्ठ सावधानीसहित कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र हामी स्वयम पनि सचेत हुनै पर्दछ ।
नेकपा एमालेबाट टिकट पाइ अध्यक्षमा जित्नु भयो अरु पार्टीप्रतिको यहाँको धारणा के छ ?
हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक दल छैनन् ।अहिले भन्नुपर्दा मात्र दुइ दल छन् । काम गर्ने दल र काम नगर्ने दल । काम नगर्ने दलमा माफीया दलाल,कमिसनखोरी हुन उनीहरुले काम गर्ने दललाई बिगार्न खोज्दछन्,भाँड्न खोज्छन् । ति भाड्न खोज्नेहरुलाई परास्त गर्दै कार्य गरिरहेको छु । अरु पार्टीगत समस्या यो वडामा नभएको जानकारी गराउँदछु ।
तपाइ पेशाले इञ्जिनियर के देखेर राजनीतिमा होमिनु भयो त ?
म समाज सेवा रुचाउने मान्छे हुँ । आकर्षणको विषय सामाजिक काम नै हो । समाजलई बस्नलायक बनाउने कुरामा नेतृत्वलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । समाजका सिमित युवाले राजनिति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो क्षेत्रमा आइपुगें ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र १५ वडालाई विकास निर्माणको कुरामा कुन स्थानमा पुर्याउनु भएको छ ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद ! साँच्चै मनमा सोधिए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न लाग्यो हाम्रो वडा १५ मा रहेको भौतिक साधन,प्राकृतिक,सांस्कृतिक,धार्मिक स्रोत राजश्व संकलन र परिचालनको हिसावले वडा १५ले ए ल्पस ग्रेडमा उत्कृष्ट पुरस्कार पाएको छ । पक्षपात नभएको वडाको अनुभुत गराउन वडाका जनतालाई सेवा लिन आउँदा टोकनको व्यववस्था तर्जुमा गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि घरदैलो सेवा व्यवस्था मिलाई उपहार समेतको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको प्रभाव निकै प्रशंसित पाइएको छ ।
स्वास्थ्य कमीहरुबाटै घर दैलोको समयमा जेष्ठ नागरिकको नङकटाई,बस्ने कोठाको सरसफाई गरिदिने कार्यले परिवारले नै बोध गरी सचेत भई यसतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ ।
राजनीति यात्रा अब कहाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिनु भएको छ ? विश्रामबारे पनि केहि सोच्नु भएको छ कि ?
पाटी एकिकरणको सबै कार्य पुर्ण भएको छैन् । एकिकरण पनि तीन ढंगको हुने गर्दछ । तेलमा पानी मिसाएजस्तो बढी गुटबन्दीमा त्रिशुली मिसिएजस्तो । जेहोस् मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राजनीतिबाट समाज सेवा गर्छु । व्यक्तिको नेतृत्वमा फरक पर्छ । मलाई विपक्षलाई पेल्छ भन्ने आरोप छ । मैल विपक्षीलाई होइन उहाँहरुको खराब पवृतिलाई पेलेको हुँ । जिरो स्थितिमा ल्याउनको लागि सेवाग्राहीलाई अलमल्याउनु भएन् । चित्त नबुझेका कुरा वामदेव गौतमलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन गरेर ल्यउन खोज्ने प्रवृति । यस्तो प्रवृतिले जनहित गर्दैन । अध्यक्षले मात्रै गरेर मात्रै नि नहुने रहेछ । सिद्धान्त त भारतीय विस्तारवाद भन्दै हिड्यो आखिर आफ्नै क्षेत्रमा विस्तारदेखि निर्माण भारतको जिम्मामा परेको छ । त्यो भएर बेलाबेलामा चुनौति धेरै आइरहन्छन् ।
अन्त्यमा हाम्रो सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रश्नमा नसोधिएको र भन्नै पर्ने केही छ कि ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद मेरो भन्नै पर्ने त केही छैन् । विकासलाई विचारले राष्ट्रिय स्तरमा सोच्नुपर्ने रहेछ ।
हाम्रा कुरा पनि सुनिदा रहेछन् भन्ने महशुस भयो । दुनियाँको खबरपत्रिकाले हाम्रो वडाको खबर प्रकाश र प्रचार गर्न समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथै दुनियाँको खबर साप्ताहिक टिमप्रति पनि मेरो शुभकामना छ ।